Daymada Dooddii Xalay: Maxaa kala qabsaday musharaxiinta? | Cabays.com
Daymada Dooddii Xalay: Maxaa kala qabsaday musharaxiinta?
October 20, 2017 - Written by Cabays
Doodii Caawa (Xalay) ee Musharaxiinta Doorashada Jamhuuiryad Somaliland:
Doodu waxay ahayd mid mid loo baahnaa, aadna loo agaasimay, waana mid mudan in lagu hambalyeeyo qaban qaabiyeyaasha.
Laakiin doodan maxaa ka muuqday?
Marka hore dooda waxay ahayd mid saddexda musharax ay fadhiga kaaga jawaabayaan wixii su’aalo ah qaybtii dambe oo kuma dhamaysan taagni in ay ku doodaan, mana jirin in doodu tijaabiso tamarta uu musharax kastaa lee yahay ee uu u adkaysan karo taagni dheer, taas oo ah mid madaxda aduunka ee dood loo qabto astaanta kowaad ee la tijaabiyo ay tahay. Doodu fadhi raaxo leh ayey ahayd mid ay u fadhiyeen musharaxiintu, hase ahaatee qodobada dooda iyo su’aaluhu waxay kuwo diiriyey fadhigooda qayntii dambe. Sidoo kale doodu ma ahayn mid musahraxiinta iyo daadihiyeyaashaba loo sheegay muhiimda in ay wax ku gudbiyaan afkooda hooye ee Soomaaliga- Dooda waxa ahayd mid aad muudaysay in erayadii ugu mhiimsanaa ee bulshada wada gaadhi lahaa ay Afka- Ingiriisiga ku yeedhinayeen, waxaan doodu ahayd mid qaybo badan oo ka mid ah u baahan turjumaad ama eray bixin Af-Soomaali ah. Dooduse waxay sidoo kale fagaaraheedu u muuqday mid wacyi galin ah oo bulshada laga wacdiyayo qaybyaalada oo ah daareen cabsi ah oo ku lalmaan doorashadan. Qaaabka iyo hanaanka doodan loo qaban-qaabiyey ayaa iyaduna is weydiin leh, ma ahayd mid saxaafa ahaan iyo qaab baahineed idaacadeed ay hagayso, mise qaab hay’adeed iyo arin ku haya dabada msahruuc la ka faala qaatay oo guno lacageed ku baayso..
Inkastoo aanay muhiim ahayn tandambe ee cida ka faala qaadatay haddana, qaab hay’ada ama urur saxaafad ka baxasan oo qaban qaabiya doodaha siyaasadu waa kuwo muujinaya heerka dhaqaale ku tiirsanaan ee saxaafada ay tahay in ay iyadu hagto doodahan noocan ah oo kale.
Dhank Musharaxiinta iyo waxay is weydaarsadeen:
Musharax Faysal Cali Waraabe: Waxay u ahayd fursada uu kaga aarsanayey musharax C/raxman Cirro oo u si gaar ah u abaaray marar badan. Dhanka kale waxa ay u ahadyd maragsi u bulshada kula maragsanayo in uu hore u khayaameeyey, sida uu doodiisa dhextaalka uga dhigay dhacdooyinkii ay isla soo mareen. Musharax Faysal waxa uu ku weeraray Cirro erayo ka culus kuwii uu ku weeraray musharax Muuse Biixi. Musharax Faysal waxay uu u muuqday nin bulshada u muujinaya musharax Cirro ha isaga u muuqda.
Dhanka arimaha guud ee sida Arimaha Dibada, baabiinta qabyaalaa iwm, waxa uu u muuqday musharaxa aad iskugu bogay oo waxa wax walaba “Aniga” ayuu lahaa, umana hadal sidii musharax koox khabiiro dawlad dhisi kara hogaaminaya. Musharax Faysal habka u uga jawaabayey su’aalaha waxay ahayd mid kalsooni badani ka muuqato iyo musharax qorsheyaal meel u yaaleen mudo dheer, wax walaba diyaar u yihiin, .dhanka kale waxa uu ahaa musharaxa doodan sida dheeraadka ah dadka inta erayada afkiisa ka soo wada bixin ay qaar badani sii qoslayeen, waxa uu dooda kaga jiray dhanka madadaalada iyo ka qoslinta, inskatoo ay saga musharax ahaan ka hayd dhab u jaawbis. Musharax Faysal marna ma dhimin xawaaraha uu cod haan ku lalinayey doodiisa, waxaana ka muuqday diiranaan aad uga badan ta labada musharax ee kale.
Inkastoo sidoo kale Musharax Fayasal laftiisu qosolka dadka la raacayey marka uu eray xanaf iyo xajin ama isku camiris ah wata yidhaa. Hase ahaatee waxa uu eray kaftan culus, balse natiijada doorashada ku aroora ku riday Musharax Muuse oo mar isagoo aan wariyihii daadihinayey isaga cod baahiya siin, su’aashana weydiin, uu musharax Muuse is mooday in uu isaga la hadlayey, iskuna dayey in uu ka jawaabo, waxaana markii Faysal oo hadalka lahaa loo duway, uu ku turay musharax Muuse eray aad uga qosliyey labaa musharax iyo dad weynaha, eraygas oo ahaa mid ku aroora in sida uu Muuse hadalka aanu lahayn u qaatay doorashadana u qaadan ama erayga uu u dhigay musharax Faysal”Doorshada naga boobin”
Musharax Muuse Biixi Cabdi: Waxay u ahayd isna fursada uu isku muujiyo in uu aad uga dawan yahay musharax Cirro, weerarkana waxa uu culayskiisa saaray musharax Cirro, mushrax Faysal waxa aad moodaysay in aanu aad u abaarayn. Hase ahaatee ta uu musharax Cirro ku soo xidhay wax ay ahayd arinka wada hadalada Soomaaliya iyo ka jawaabista arimaha la xidhiidha oo uu musharax Cirro marna eeda wixii khaldamay soo galiyey, marna ku tilmaamay nin aan afka ka difacin Somaliland markay noqot arimaha Soomaaliya.
Musharax C/raxman Cirro: Waxa doodani muujisay sida uu aad uga degan yahay labada musharax ee kale, hase ahaatee waxa kale oo ay muujisay sida aanu eedaha si darban iskaga difaaci karin, Doodan musharax Cirro waxa uu aad iskugi dayey in uu kaga duwan yahay labada kale ee musharax xidhiidhka dibada, isagoo labada musharax ee Muuse iyo Faysal ku duway kuwo kala ah khabiiro midi askari yahay, midna khabiir dhanka dhismaha ah, hase ahaatee taasi uma meel marin markii uu musharax Muuse Biixi Cabdi ku buryey isagoo waayo aragnimadii diblamaasiyadeed ee musharax Cirro ku tilmaamay mid heer xoghayn-hoose ah oo laba sano ku kooban. Dhanka kale Musharax Cirro waxa uu darbad weyn la helay musharax Muuse Biixi Cabdi oo wixii ka xumaaday xukumada ee la xidhiidhay siyaasada ariaha dibada gurada u saaray siyaasiyiintii ka baxay xukumada iyo xisbiga Kulmiye ee ku biiray xisbiga Waddani, taas oo musharax Cirro u eedayntii xubnaha ku buuray ku reebay siyaasada xukumada Kulmiye. Musharax Cirro doodan waxa uu ahaa mid ay iskugu tageen labada musharax ee kale marka la qiyaaso inta naqdi iyo dhaliil ee dusha loo saaray. Taana waxa ka dhigay isagoo u muuqday musharaxa ugu nugul, waayo waxa uu dhan kaga jiray saddexda haykal ee Qaranka JSL oo uu ka mid yahay Golaha Wakiilada , waliba ku hogaamiyey mudo kordhin dheer oo todoba sano ah. Musharax Cirro dooda waxa uu kala tagey dhaawac ka soo gaadhay weerarkii musharax Faysal Cali Waraabe. Hase ahaatee weerarkii labada dhan kaga yimid waxay direen sawir muujinaya in uu yahay musharaxa u baahan in dood kale fursad loo siiyo. Musharax Cirro doodan waxa nabarada ugu badan ku dhigay msuahrax Faysal Cali Waraabe.
Marka la soo af-,eero doodii saddexda musharaxa midba dhankiisa ayey u muujisay nooca hogaameed ee uu noqon karo haddii uu guulaysto,Hase ahaatee dood 2aad oo ay iskugu soo noqdaan waay saani u soo muujin kartaa ka ku guulaysan kara doorashada sanadkan
La soco qormo kale iyo doooda.